တရားပွဲတွေများသလောက် – တရားမဲ့နေသောနိုင်ငံ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« We don’t need to believe in the same god or faith ကိုးကွယ်ရာတူဖို့ မလိုဘူး အစွန်းမရောက်ဖို့ လိုတယ်
ASTRO Satellite TV Malaysia is shamelessly cheating customers »
တရားပွဲတွေများသလောက် – တရားမဲ့နေသောနိုင်ငံ
– တရားမဲ့နေသောနိုင်ငံ ။
– မေတ္တာငတ်နေသောနိုင်ငံ ။
– အိုးမဲ့ အိမ်မဲ့တွေများနေသော နိုင်ငံ ။
– စာဂမှုတွေနည်းနေသောနိုင်ငံ ။
– ဘုန်းတော်ကြီးတွေ ပေါသလောက်
– ဘာသာ သာသနာအတွက်
– စိုးရိမ်နေရသောနိုင်ငံ ။
– အမျိုးသမီးမဝင်ရ ဆိုတဲ့ဆိုင်းပုဒ်တွေ
– များလွန်းသောနိုင်ငံ ။
– လုံခြုံမှုမဲ့နေသောနိုင်ငံ ။
– ဗိုလ်မှူး ဗိုလ်ချုပ်တွေချမ်းသာသလောက်
– ရဲဘော်တွေ ငတ်ပြတ်နေသောနိုင်ငံ ။
– အမှုအခင်းတွေများနေသောနိုင်ငံ ။
– ဝန်မပြီးသောနိုင်ငံ ။
– မြေမဲ့ ယာမဲ့တွေများနေသောနိုင်ငံ ။
– မြေဈေးနှုန်းတွေ ဖေါင်းပွလွန်းသောနိုင်ငံ။
– ဒါဒို့ပြည် ဒါဒို့မြေ သီချင်းကို
– သီဆိုနေသောနိုင်ငံ ။
– ထွန်းကားနေသောနိုင်ငံ ။
– ဖေါ်ပြနေရသောနိုင်ငံ ။
– ပညာမြင့်မှ လူမျိုးတင့်မည်-လို့ပြောပြီး
– မဖြစ်ညစ်ကျယ်သုံးစွဲနေသောနိုင်ငံ ။
– အာဂုံရမှ အာဂလူ လို့ပြောပြီး
– အာဂလူတွေ ရှားပါးနေဆဲနိုင်ငံ…
– စသည် စသည်
– ဒီနိုင်ငံ ဤနိုင်ငံကို
– ရွှေနိုင်ငံလို့ ခေါ်သင့်
– သင် ဥာဏ်ဖြင့်ချင့်လော့ …။
This entry was posted on December 18, 2014 at 9:48 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
One Response to “တရားပွဲတွေများသလောက် – တရားမဲ့နေသောနိုင်ငံ”
drkokogyi Says:	December 18, 2014 at 9:55 am | Reply အာဏာရှင်စနစ်ကို အားပေးသည့် မဘသကို ယုံကြည်မှုနည်းလာဟု မဘသ ဆရာတော်မိန့်
အင်္ဂါနေ့၊ ဇူလှိုင် ၁ ရက်၊ ၂၀၁၄ ခုနှစ်။
မဟာသန်္တိသုခ အရေး ကိစ္စကို တစ်စုံတစ်ရာ ပြောကြားခြင်းများ မရှိဘဲ အာဏာရှင်ကြိုက် လုပ်ဆောင်ခြင်း များ တွေ့လာရသည့် အတွက် အမျိုးဘာသာ၊ သာသနာ စောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့(မဘသ) အပေါ် အဖွဲ့ဝင် သံဃာတော် အချို့က ယုံကြည်မှု အားနည်းလာသည်ဟု မဘသအဖွဲ့ဝင် ဦးသောဘိတ (ဘ၀အလင်းရောင် ဆရာတော်)က မဇ္ဈိမကို မိန့်သည်။
“အဓိက ကတော့ အာဏာရှင်စနစ်ကို အားပေးတဲ့စကားသံတွေ လုပ်ရပ်တွေကို လုပ်တာပဲ။ သူတို့သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းက မဘသအတိုင်း သွားမယ်ဆိုရင် မပြောလိုဘူး။ ဒါပေမဲ့ သွားနေတဲ့ လမ်းကြောင်းက အတိုက်အခံ အင်အားစုတွေကို အပုပ်ချတယ်။ စစ်အစိုးရကြိုက်တဲ့ စကားတွေကို ပြောတယ်။ မဟာသနိ်္တသုခကိစ္စမှာ တစ်စုံတစ်ခု ၀င်ရောက်ပြောဆိုမှု မရှိဘူး”ဟု ဆရာတော်က မိန့်သည်။
ဗုဒ္ဓဘာသာကို အခြားဘာသာက ဖျက်ဆီးမှသာ ဘာသာ၊ သာသနာကို ဖျက်ဆီးသည်ဟုဆို၍မရဘဲ ဖျက်ဆီးသူ မည်သူပင်ဖြစ်စေ ဘာသာ၊ သာသနာကို ဖျက်ဆီးသူဟု သတ်မှတ်ရမည်ဖြစ်သည့်အတွက် မဟာသန်္တိသုခအရေး မဘသအနေဖြင့် နှုတ်ဆိတ်သည့်အပေါ် ဆရာတော်က ဝေဖန်မိန့်ကြားလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
“သာသနာနဲ့ သံဃာကို ဒီလိုအနိုင်မကျင့်နဲ့။ အဲဒါလေးတော့ ၀င်ပြောသင့်တယ်။ မှတ်ချက်လောက်တော့ ပေးပေါ့။ ဒါအမျိုးဘာသာ သာသနာကိစ္စ မဟုတ်ဘူးလား”ဟု ဆရာတော်ကမိန့်သည်။